भोलि सम्म ओली पक्षका अरु १५ जना माधव क्याम्पमा प्रवेश गर्ने , स्वागतको कर्यकतम तय ! - Rising Dainik
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on भोलि सम्म ओली पक्षका अरु १५ जना माधव क्याम्पमा प्रवेश गर्ने , स्वागतको कर्यकतम तय !
यसअघि आलेले ओली गुट छाडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पहलमा ओली गुटबाट केही सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेका थिए ।आले अहिले सांसदहरु तान्न खटिएका छन् । उनले ओली गुटका सांसदहरुसँग सम्पर्क गरी कुराकानी बढाएका छन् ।
माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन ओली तयार !
BREAKING NEWS….;अर्को दुखद खबर! मर्स्याङ्दीमा ट्रक ख’स्यो, छ जनाको मृत्यु’, दुई ग’म्भीर घाइते